Waxii doorashada inaga qaldamay ma la saxi karaa? | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
Waci galinta cod bixiyayaasha
Shaqalaha doorashada goobaha codaynta
Cadaynta Muwadinka (IRIS BIOMETRIC)
Haddii, uu qofku soo qato kadhka codaynta, oo qofkale leeyahay (sawirkana isku eeg yihiin), isla markana shaqaalaha goobtu ayna si fiican u hubin.
Ama waa haddii, uu qofku samaysto kadh codaynta oon foorjari ah, sawirkiisa ku dhajiyo. magaca uu doonayo inuu isticmaalana uu yahay qofkale goobta uu doonayo ka diiwan gashan.
Hoyga iyo cuntada shaqalaha doorashada (Accommodation)